» दशैंमा बालबालिकालाई डाडु–पन्युँ चिनाऔं
अर्ति–उपदेश नदिई सन्तानलाई मूल्यमान्यता सिकाउने सबभन्दा सजिलो र राम्रो ठाउँ भान्सा नै हो । त्यहाँ उनीहरूलाई आफ्नो आर्थिक अवस्था, बजार, अर्थतन्त्र, पारिवारिक, कृषि, वातावरण, परम्परा, समाज र संस्कारका आधारभूत पाठ थाहै नपाई सिकाउन सकिन्छ ।
पाठकसित एउटा प्रस्तावः घरमा पाँच वर्ष माथिका बालबालिका छन् भने यस पटक दशैंमा उनीहरूलाई पकाउन\_बनाउन पनि सामेल गराऔं । वसन्तपञ्चमीमा अक्षर चिनाए जस्तो दशैंमा हातहतियार, भाँडाकुँडा र डाडु–पन्युँ चिनाए हुन्छ ।
५–६ वर्षकी छँदा एक दिन भान्सामा राखेको कुखुराको फुल देखाएर हाम्री छोरीले सोधी, “यसलाई ‘ह्याच’ गर्‍यो भने चल्ला निस्किन्छ ?”
“निस्किँदैन छोरी !”
उसकी आमा र मैले मुखामुख गर्‍यौं । जवाफ दिनै थियो, “यो फुल पार्दा पोथीले भालेसित सल्लाह गरेको छैन, त्यसैले !”
“ए, हजुरहरूले सल्लाह गरेर हामीलाई पाएको हगि ?”
“हो नि त ! आमाले आफूखुशी पाएको भए म कसरी बाबा हुन्थें र ?”
उसको प्रजनन् शिक्षाको पहिलो पाठ भान्साबाटै शुरू भएको थियो ।
करीब सात वर्षको हुँदा एक दिन छोराले सोध्यो, “चाउचाउ केबाट बन्छ ?”
“अनि सिन्के नूडल्स नि ?”
“त्यो पनि मैदाबाटै बन्छ ।”
“त्यसो भए किन नूडल्स खानुहुन्छ, चाउचाउ खानुहुन्न त ?”
जवाफ थियो, तर उपयुक्त खोज्न एकैछिन लाग्यो । सल्लाह गरेर जवाफ दियौं, “चाउचाउ कहिलेकाहीं फुकै र कहिले उसिनेर मात्र पनि खाइन्छ, हो?”
“नूडल्स कहिल्यै त्यसरी खाइन्छ ?”
“मैदा त एउटै हो । तर नूडल्स खाँदा तरकारी, अण्डा, मासु आदि पनि खाइन्छ । तिनमा शरीरलाई चाहिने धेरै कुरा पाइन्छन् । त्यसैले चाउमिन, थुक्पा, स्पागेट्टी आदि चाउचाउभन्दा अलि राम्रा खानेकुरा हुन् ।”
मैले उसलाई मोनो सोडियम ग्लुटामेट (एमएसजी वा अजिनोमोटो) को कुरा भनिनँ । किनभने त्यसबेलासम्म एमएसजीको राजनीति केही हदसम्म मैले बुझिसकेको थिएँ ।
हामीले घरमा निकै कम मात्र चाउचाउ पकायौं । जंकफूड (त्यसबेलासम्म डा.अरुणा उप्रेतीले ‘पत्रु खाना’ शब्द चलाइसक्नुभएको थिएन) शब्द र अवधारणा हाम्रा छोराछोरीले भान्साबाटै सिकेका हुन् ।
हामीले छोराछोरीलाई पकाउन\_बनाउन त खासै सिकाएनौं, तर खानेकुरालाई यथोचित प्रेम र सम्मान गर्न भने सानैदेखि सिकायौं । उनीहरूकी आमाका शब्दमा, “मुखमा स्वाद बसाइदियो भने पकाउन आफैं सिक्छन् ।” उनीहरूले सिके पनि !
टेलिभिजनबाट अनेकथरी खानेकुराको विज्ञापन आउँदा हामीले विज्ञापन किन बनाइन्छन् र बजारले हाम्रो छनोटको स्वतन्त्रतालाई कसरी कब्जा गर्छ भन्ने कुरा समेत उपयुक्त तरिकाले, उपयुक्त भाषामा सजिलै बुझाउन सक्यौं ।
पछि उनीहरूले खानेकुराको विश्वव्यापी अर्थशास्त्र, राजनीति र बजारनीति पनि बुझ्दै गए । हामीलाई लाग्छ, उनीहरू संसारको जुन कुनामा पुगे पनि उब्जाउने र पकाउने मान्छेलाई विशेष सम्मान गर्ने भएका छन् । जहाँको खानेकुरा पनि स्वाद मानेर खाने भएका छन् ।
केही खास खानेकुरा मीठो नलाग्नेको सूचीमा पर्नु अस्वाभाविक होइन, तर उनीहरूलाई हामीले खाने सबै लोकपरिकारका बारे जानकारी छ ।
भान्सामा सघाउने ‘अवसर पाएका’ बालबालिकाले आमालाई अझ बढी चिन्छन् । आमाबाटै अन्न चिन्छन्, आँटा र मैदाको फरक चिन्छन्, मकैको पीठो र बेसन हेरेरै चिन्ने हुन्छन्, मरमसला चिन्छन्, बजार चिन्छन्, सस्तो महँगो चिन्छन् । भान्सामा काम गर्ने बालबालिकाले रोटी बेल्न सिक्छन् र अलि ठूला भएपछि त मसला पिस्न पनि सिक्छन् । र, कदाचित बाबु पनि यस्ता कुरामा सहभागी भए भने उनीहरूले बाबुलाई समेत फरक किसिमले चिन्छन्, फरक किसिमले मान र माया गर्छन् ।
अपवादलाई छाडेर बालबालिकाका लागि भान्सा आमाको ‘अधिकार क्षेत्र’ हो । यो जस्तै आमाहरूको शैक्षिक योग्यता वा पेशागत विशिष्टताले फेर्न नसकेको अर्को कुरा हो, परिवारका सबभन्दा जान्ने मान्छे भनेका बाबु–हजुरबाबु वा अरू पुरुषहरू हुन् । यी दुवै कुरा सत्य होइनन् तर ‘यी कुरा सत्य होइनन्’ भनेर मात्र पुग्दैन ।
ती कुरालाई फरक कोणबाट हेरेर र देखाएर उनीहरूका मनमा पसेका रुढिवादी धारणा फेर्न र पस्नै नदिन विचारसित सचेततापूर्वक भिड्ने मैदान पनि भान्सा हो ।
भान्सा यस्तो ठाउँ हो, जहाँ बालबालिका आमासित बस्न पाउँछन् । उनीहरूले आमाको काम, व्यस्तता, दुःख, सीप, व्यवस्थापन क्षमता, व्यवहार कुशलता सबै कुरा देख्न पाउने ठाउँ त्यहीं हो ।
भान्सामा बस्ने मौका पाएका बालबालिकाले बिस्तारै बुझ्छन्, बाबुहरू किन मासु पकाउन पारङ्गत हुन्छन् र कुराउनी घोट्न अघि सर्छन् । ‘म असाध्य स्वादिलो मासु पकाउँछु’ भन्ने पुरुषहरू किन छ्याप्छ्याप्ती भेटिन्छन् तर ‘म गहतको दाल वा सुक्खा रोटी वा घिरौंलाको तरकारी वा रायोको साग मीठो पकाउँछु’ भन्ने किन भेटिंदैनन् ?
मेरै कुरा गरौं, मलाई धेरै प्रश्न गर्न भान्साले सिकाएको हो । म सानो छँदा आमा पर सरेका बेला अहिलेभन्दा धेरै छुइन्थ्यो । म सोधिरहन्थें, गुन्द्रीले किन छुइन्छ र भुइँ किन छुइँदैन ? हजुरबा–बाहरूले अप्सानी (औसानी) हालेर भात खाँदा म सोध्थें, “किन ठूलाले मात्र चढाएको ? मैले पनि त्यसरी नै भातका सिता चढाउँदा के हुन्छ ? बर्तमन (व्रतबन्ध) गरेकाले बासीभात किन खानुहुँदैन ?” प्रश्नहरू पक्कै फेरिएका छन्, तर अहिले पनि सकिएका छैनन् ।
प्रश्न गर्न सिकाएका बालबालिकाले प्रश्न गर्छन् पनि । खाइसकेर टेबलबाट उठ्दा आआफ्ना थाल माझ्ने ठाउँसम्म पुर्‍याउने चलन भए पनि मैले केही पटक त्यसो गरिंनछु । एकदिन छोराले अलि ठूलै स्वरमा सोध्यो, “बाबा, हजुरले चाहिं थाल पर पुर्‍याउनु पर्दैन ?”
कुराको बिट अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या उठाएर मारौं । केटाकेटीको मोबाइल–व्यसन धेरैका लागि समस्या भएको छ । भान्साको रमाइलो सहभागिताले बालबालिकालाई मोबाइल–व्यसनबाटै मुक्त गर्छ त नभनौं, तर मोबाइल–व्यस्तता भने घटाइदिन्छ । प्रशंसा सहितको भान्साको सहभागिताले उनीहरूलाई तत्कालै परिणाम आउने काम गर्ने मौका दिन्छ र आफूलाई पनि निकै मद्दत हुन्छ । हिमाल खवरपत्रिकाबाट साभार ।